Okthobha 2018 -IiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2018 / EyeDwarha
Inyanga: October 2018
ezaposwa ngomhla Oktobha 1, 2018 Oktobha 1, 2018
Siyavuya ukwazisa ngoqwalaselo olupheleleyo lwevidiyo IBoxchip S700A -I-DMR / Analog transceiver ye-hybrid, ene-Android OS kunye ne-4G / LTE. Ifumaneka kwiinguqulelo ze-VHF kunye ne-UHF.
Olu hlaziyo lwevidiyo lubonisa imodeli ye-UHF.
Uya kuyithanda le radio kwaye sikulungiselele isaphulelo. Ukuba usebenzisa ikhowudi yokukhupha I-HRCDMR phambili phuma uya kuba nesaphulelo esongezelelweyo kunye nokuthumela simahla, nokuba uhlala phi.
Ividiyo ngu HamRadioConcepts
Odola iBoxchip S700A yakho ngoku